October 2019 – Page 2 – siifsiin
Seenaa Kolonel Daraartu Tullu gabaabumatti ibsuun baay’e rakkisaa waan ta’eef, hanga danda’amaneti xiqqesinee isiif dhiyeesuuf yaalla. Sababiin isaa jabaa ofii abbadhumatuu faarfata waan ta’eef. Daraartu kan dhalatte ganda baadiyaa Oromiyaa keessatti, nannawaa Boqojiitti. Nannawwan sun immoo akkuma beektan burqaa atileetota keenyatti. Waantonni Daraartu adda taasisan waantota heddutu jiru, fakkenyaf ishee, Akka Afrikaatti dubartii jalqaba olompikii … Continue reading Kolone Daraartu Tullu/ Kutaa tokkoffaa